Momba anay - Yangzhou qiangjing fanatanjahantena Co., Ltd.
• Yangzhou qiangjin vokatra fanatanjahantena co., Ltd. natsangana tamin'ny 1992, ao amin'ny tanàna ara-tantara sy ara-kolotsaina Jiangdu atsinanan'i Yangzhou, akaikin'ny làlan'i Beijing-Shanghai ary ny seranam-piaramanidina Jiangsu Central. Ny orinasa dia entana fiarovana ara-panatanjahantena, lamosina badminton, famolavolana tenisy amin'ny tennis, fivoarana, famokarana, serivisy ho iray amin'ny orinasa maoderina. Ankehitriny dia ametrahana faritra 18 000 metatra tora-droa, faritra fananganana 9000 metatra tora-droa, dia nandroso fitaovana famokarana sy fanandramana 300 setroka. Mpiasa maherin'ny 300, ao anatin'izany ny mpamorona 20, teknisianina, mihoatra ny 30 ny olona, ​​olona 10 no manana anaram-boninahitra matihanina. Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana fitantanana kalitaona ISO9001 tamin'ny 2004, ny vokatra rehetra dia nandalo ny departemanta fanaraha-maso ny kalitao, nomena ny marika malaza Jiangsu, marika ara-barotra malaza Yangzhou sy ny sisa.
• Nandritra ny taona maro izay, ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa dia fitadiavantsika mandrakizay, "Fahasoavana, fikatsahana fahombiazana" ho tanjona. Fepetra takiana amin'ny kalitao vokatra: "Toerana roa toerana", "efatra tsy." momba ireo vokatra vita, namorona tanjona "double zero" ny orinasa dia "zero defect", "fitoriana tsy misy farany." Nahazo tamim-pinoana tamim-pinoana ny olona tao Qiangjin mba hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa .Nahoana ny kalitaon'ny vokatra tsara, ny teknolojia maoderina, ny serivisy famarotana tonga lafatra mba hahazoana ny ankasitrahan'ny indostria sy ny orinasa, vokatra manerana ny firenena, aondrana any Amerika Avaratra, Vondrona Eropeana, Australia,. Japon, Korea Atsimo, Azia atsimo ary faritra hafa.
• Ny orinasanay dia hanohy ny fanamafisana ny fanavaozana ara-teknolojika, ny fampiharana ny paik'ady ho an'ny olombelona, ​​ny fanatanterahana feno ny fitantananana Model Model Fahafinaretana, toy ny hoe, mifantoka amin'ny kalitao vokatra, ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa, hanome anjara bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fanatanjahantena sinoa. .